Nyanzvi muNyaya dzezveMatongerwo eNyika Dzinoti VaMnangagwa Vanogona Kudzingwa muZanu-PF
VaEmmerson Mnangagwa naVaRobert Mugabe
Dzimwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, avo vanoonekwa sevane mukana wekutora matomu ekutungamira bato reZanu PF kubva kumutungamiri wenyika VaRobert Mugabe, vanogona kudzingwa kubva mubato iri sezvakaitika kuna Amai Joice Mujuru.
Nyanzvi idzi dzinotiwo hazvisi pachena kuti ndiyani achatora masimba mubato iri.
Zvichitevera kudzingwa kwevaiva mutevedzeri waVaMugabe mubato nemuhurumende, Amai Joice Mujuru, vamwe vakuru vakuru mubato reZanu PF kusanganisira mudzimai waVaMugabe, Amai Grace Mugabe, vakatanga kutaura mashoko ekushora nekuderedzera VaMnangagwa pasi.
VaMnangagwa avo vanonzi vanotungamira chikwata cheTeam Lacoste vari kupomerwa mhosva yekuda kutora masimba kubva kunaVaMugabe vachiita zvekukambira.
Asi nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti hapana chitsva pane zviri kuitika kuna VaMnangagwa vachiti itsika yaVaMugabe yekutuma vamwe mubato ravo kushungurudza pamwe nekunyomba avo vanofunga kuti vanenge vave nesimba.
VaVivid Gwede avo vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vakaudza Studio 7 kuti hapana chitsva pane zviri kuitika kuna VaMnangagwa.
VaGwede vakaudza Studio 7 kuti VaMugabe vari kurwisanisa chikwata chaVaMnangagwa necheG40 senzira yekuramba vari pachigaro dzamara vapinda muguva.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute, Doctor Pedzisai Ruhanya, vanoti hapana chingatadzise VaMugabe kutandanisa VaMnangagwa mubato sezvo vakabvira kuita izvi kare.
VaRuhanya vanoti pane vamwe vakuru vakaita sanaVa Edgar Tekere vakatombotandaniswa mubato iri.
Kunyange hazvo vachibvuma kuti VaMnangagwa vanogona kudzingwa mubato, mukuru weMedia Centre, VaEnerst Mudzengi, vanoti hazvisi nyore kuvadzinga panguva ino zvikuru sei nyika yatarisana nesarudzo.
Mashoko aVaMudzengi anooenderanawo nemashoko akataurwa kubepanhau reThe Standard apo vakati VaMnagagwa vanerutsigiro rwakasimba kubva kuvakuru vechiuto nevakarwa hondo yerusununguko zvinopa kuti tsoro yekuvabvisa inetse kuronga.
Nyanzvi idzi dzino bvumirana kuti vanhu vangangotaura kuti VaMnangagwa kana ani ane mukana wekutora matomu kubva kuna VaMugabe asi hazvisi nyore.
VaMudzengi vanotiwo hazvina kujekawo mubato iri kuti kunyange VaMnangagwa vakadzingwa mubato ndiyani achatora matomu.
Mumwe mugari wemuHarare, VaOwen Dhliwayo, vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti kudzingwa kwaMai Mujuru pamwe nezviri kuitika kunaVaMnangagwa zvine chekuita nemudzimai wemutungamiriri wenyika, Amai Grace Mugabe.
Vanoti vanoona sekuti Amai ava vave kuda chigaro chepamusoro.
Asi vatsigiri vaAmai Mugabe vakaita segurukota rinoona nezvedunhu reManicaland Amai Mandi Chimene vanoti Amai Mugabe havana chido chekutungamira nyika.
VaRuhanya vanoti kunyange hazvo Amai Mugabe vaine simba pari zvino nekuda kwekuti murume wavo achipo simba iri rinopera musi unofa VaMugabe.
Nyanzvi idzi dzakaudza Studio 7 kuti hapana kana mumwe muZanu PF anokwanisa kupikisa VaMugabe uye zvese zviri kuitika kunaVaMnangagwa zviri kuitwa nekuti VaMugabe vanozvifarira.
Dzakatiwo kana ivo VaMnangagwa pachavo vanozviziva kuti vanogona kudzingwa mubato iri sezvo vakashandiswa kana kuona vamwe vakuru vakuru mubato iri vachidzingwa naVaMugabe.
Bumbiro remutemo wenyika rinoti kana mutungamiriri wenyika akafa kana kusiya basa nezvikonzero zvakasiyana siyana, mutevedzeri anenge apedzesera kubata chinzvimbo chemutungamiriri wenyika ndiye anobva atungamira hurumende kwemwedzi mitatu kupa bato mukana wekudoma munhu anozopedzesa nguva yemutungamiriri anenge afa.
Bumbiro reZanu PF rinoti kana izvi zvikaitika panoitwa musangano wekongiresi wechimbi chimbi unozodoma anotungamira bato.